माेरङकाे पथरीशनिश्चरे मंगलबारे डाडामा अजिङगर भेटीयाे | Birat Khabar
माेरङकाे पथरीशनिश्चरे मंगलबारे डाडामा अजिङगर भेटीयाे
पथरी । माेरङकाे पथरीशनिश्चरे वडा नं. १ र १० काे सिमानमा पर्ने मंगलबारे डाडामा अजिङगर फेला परेकाे छ । पथरीशनिश्चरे-1बाट उद्धार गरी ल्याईएकाे अजिङ्गर सेक्टर वन कार्यलय मंगलबारेमा ल्याईएकाे थियाे । खाेलाकाे डिलमा बासकाे घाँस काट्दा शिसैकाे रुखमा उक्त अंजिङगर देखिएकाे थिए । गाउँमा एक्कासी अजिङ्गर देखेपछि गाउँनै त्रासित बनेकाे थियाे ।
अघिल्लाे वर्ष उद्धार गरीएकाे अजिङ्गर याे भन्दा एक केजी र एक फिट सानाे छ । १ महिनाकाे अवधिमा पथरीबाट दुईवटा अजिङ्गर नियन्त्रणमा लिईएका छन् । तीनलाई बेतना सीमसार बेलाबारीलाई दिईएकाे छ ।
उद्धारकर्ता प्रेम विष्ट र वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले डरलाग्दाे प्राणीलाई लाेभलाग्दाे माया र स्नेह दिनु कम चुनाैतीपुर्ण थिएन ! तीन वर्षयता पुर्वी माेरङ्मा अाधा दर्जन अजिङ्गरलाई नियन्त्रणमा लिई उचित बासस्थानमा छाडिएकाे वन कार्यालयकाे तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।